Home Wararka Maanta Maamulka gobolka GEDO oo war cusub kasoo saaray doorashada Garbahaarey
Maamulka gobolka GEDO oo war cusub kasoo saaray doorashada Garbahaarey
Guddoomiyaha maamulka gobolka Gedo, Mudane Axmed Buulle Gareed oo wareysi cusub bixiyey ayaa ka hadlay doorashada 16-ka kursi ee taalla gudaha magaalada Garbahaarey ee xarunta gobolka, kuwaas oo ay hareeyey murano xoogan.
Buulle ayaa shaaciyey in mas’uuliyadda ugu weyn ay saaran tahay ra’iisul wasaaraha, wuxuuna tilmaamay in looga baahan yahay in doorasho ay ka dhacdo Garbahaarey.
“Ra’iisul wasaaraha isaga ayaa ah guddoomiyaha doorashada isagaa laga rabaa in Garbahaarey ay doorashada ka dhacdo isagaa lagaraa in 16-ka kursi Garbahaarey uu geeyo,” ayuu Axmed Buulle Gareed ku yiri wareysigan oo uu siiyey Shabelle TV .
Guddoomiyaha maamulka gobolka Gedo oo hadalkiisa sii wada ayaa sidoo kale xusay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin qabashada doorashada kuraasta taalla degmada Garbahaarey, wuxuuna xusay in doorashada ay u dhici doono si xor iyo xalaal ah.
“Aniga haddii aad i weydiiso kalsooni 100% ayaan ka qabaa doorashada inay ka dhaceyso Garbahaarey, waxaan ogahay inay si xor iyo xaal ah ay kusoo bixi doonaan,” ayuu raaciyey.
Dhanka kale guddoomiyaha ayaa hoosta ka xariiqay in haatan wax wada shaqeyn ah aysan kala dhexeyn maamulka uu hoggaamiyo Axmed Madoobe, isla-markaana cidda la doonayo inay wax isku raadiyo ay tahay dowladda federaalka ah, gaar ahaan ra’iisul wasaaraha.
“Annaga iyo Axmed shaqo iskuma lihin horey ayaa kuugu sheegay,” ayuu markale yiri guddoomiye Gareed oo ka hadlayey xiisadda haatan kala dhexeysa Jubbaland.
Hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyada oo maamulka Jubbaland ee xaruntiisa KMG ah ay tahay degmada Kismaayo uu ku dhowaaqay in aysan doorasho ka dhici karin magaalada Garbahaarey ee gobolka Gedo, taas oo uga sii dartay caqabadaha ka taagan doorashada.